Mpanakanto marobe miaro ny filan'ny soavaly sy ny dia mahavariana
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Mpanakanto marobe miaro ny filan'ny soavaly sy ny dia mahavariana
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • Tourism • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
by Rita Payne - manokana ho an'ny eTN
Mampifangaro soavaly sy fitsangatsanganana ny zavakanto manaitra
Mpanoratra Rita Payne - manokana ho an'ny eTN
Nisy namana iray namana nampahafantatra ahy ny asan'ilay artista anglisy manan-talenta, Marcus Hodge. Nandefa sary momba ny asany izy, ary natolotro ahy ny sarin-tsoavaly soavaly sy omby ary omby izay nahatsapa fa hitsambikina avy teo amin'ny lamba.
Ilay mpanakanto dia manana fampirantiana irery tonga tao amin'ny Osborne Studio Gallery nandritra ny volana Oktobra.
Ny ifantohan'ity fampirantiana manokana ity dia ny tontolon'ny soavaly tamin'ny dian'ny artista nandritra izay roa taona lasa izay.
Ny raibe sy reniben'ilay artista no nampirehitra ny fitiavany ny hizaha ny firenena voalohany ary avy eo izao tontolo izao ary noraketiny tamin'ny alàlan'ny kanto.
Nahaliana ahy izany ary nitady hahafantatra bebe kokoa momba ny fiainany aho. Hitako fa Hodge, izay teraka tamin'ny 1966, dia namokatra karazana asa manaitra ny aingam-panahy avy amin'ny dia nataony avy any Andalucia nankany India.
Ireo mpitia zavakanto dia afaka mijery ny sary hosodoko nataon'i Hodge amin'ny fampirantiany irery ho avy izao ao amin'ny Osborne Studio Gallery nanomboka ny 5 ka hatramin'ny 28 Oktobra 2021. Io famoriam-bola io dia mampivondrona ireo sary tamin'ny dian'ny artista tao anatin'ny roa taona lasa ary manadihady ny tontolon'ny soavaly, manomboka amin'ny soavaly Marwari ao Rajasthan, soavaly boribory iraisam-pirenena any Monaco, hatrany amin'ny soavaly soavaly sy soavaly arabo. an'ny Moyen Orient.
Hodge dia notezain'ny raibe sy renibeny izay nandany taona maro ao India, ary nandrehitra ny fahalianany hivoaka izy ireo ary hanomboka hizaha ny firenena. Ny loharanon'ny aingam-panahy manan-danja indrindra amin'ity fampirantiana ity dia ny Fetin'ny Camel tamin'ny Novambra tao Pushkar, Rajasthan, iray amin'ireo traikefa lehibe indrindra amin'ny dia teto India, fahitana tamin'ny ambangovangony. Nofaritany ny nahatonga ny fampirantiana: "Nanararaotra ny fampirantesana asa misimisy kokoa miaraka amin'ny galerie Osborne izay nisy fampirantiana irery teo aloha. Nanao dia maro tany India aho nandritra ny taona maro ary nitsidika ny tanànan'i Pushkar nandritra ny foara rameva, inefatra na in-dimy.
“Pushkar dia tanàna kely tsara tarehy, masina indrindra amin'ny Hindus, izay mipoitra ho an'ny fiainana mandritra ny tsenan-drameva isan-taona. Afaka mifaly amin'ny fientanam-po eny an-dalambe ianao fa mihemotra amin'ny tranon'ny tampon-trano kely mangina raha ilaina izany. Toerana mahafinaritra hankafizanao ny fahasamihafana sy ny tempo lehibe. ”
“Saingy talohan'ny nanombohan'ny areti-mandringana dia efa nitsidika an'i El Rocio any Andalucia aho izay misy fetibe lehibe iray hafa, miaraka amin'ireo soavaly sy olona an-jatony maro avy amin'ny faritra samihafa.”
Rehefa afaka dimy taona nianarana ireo teknikan'ny Old Master tao Palma, Mallorca, dia nanao ny anarany ho mpandoko sary i Hodge. Nandeha voalohany tany India izy tamin'ny taona 2000. Ity dia ity dia fiantombohan'ny fientanam-po mahery vaika amin'i India, noho ny kolontsaina, ny tontolo ary ny kalitaony ara-panahy. Na dia manana lohahevitra mpitaingin-tsoavaly aza ny fampirantiany ho avy, ny fombany dia mivoatra hatrany ho lasa matanjaka kokoa sy tsotra kokoa, indraindray ny sary hosodoko ara-panoharana dia manome abstraction.
Ireo sary hoso-doko dia mazàna mijery ny biby sy ny olona, ​​ny maritrano ary ny tontolo. Araka ny voalazan'i Hodge, “mampihetsi-po ny lohahevitra fa tena fifandanjana eo anelanelany sy ny fampiasana azy io ho toy ny sehatra hamoronana vokatra tena manaitaitra sy hosodoko. Ny fanaovana ny endrika sy ny fihenjanan'ny sary hoso-doko dia zava-dehibe toy ny maneho ny sary ary rehefa mahomby dia misy ny firindrana mahafinaritra eo amin'izy roa. ”
Nilaza i Hodge fa miverina amin'ny lohahevitry ny soavaly foana izy satria mahita zavatra manaitaitra sy manintona azy ireo foana - fifandonana mahafinaritra amin'ny hatsaran-tarehy sy ny hakingan-tsaina mekanika. Na eo aza ny fiovan'ny endrika, ny lohahevitra maharitra iray, amin'ny ankapobeny, dia India. Hoy izy: “Ny teknikan'ny sary hosodoko dia mifindra avy amin'ny representational mankany amin'ny abstract ary miverina satria ny ankamaroan'ny zavatra niainanao tany dia mitaky valiny hafa. Ny biby na ny toerana mahafinaritra dia mitaky ahy handoko azy tsara ary hiezaka ny hamerina amin'ny sary ilay sary hosodoko izay mahafa-po ara-batana sy maneho marina sy marina ny lohahevitra. ” Ny lohahevitra hafa, toy ny lafiny ara-tantara amin'ny Gateway of India na ny sary hosodoko Breaking the Cycle avy any Varanasi, dia mila fomba hafa mihitsy. Io no mitazona ny traikefa velona sy mahaliana ho azy.
Na dia any India sy El Rocio any Espana aza no tena ifantohan'ny asany dia misy ihany koa sary hosodoko vitsivitsy avy any Frantsa izay onenan-drainy (mpanakanto koa). Notsipahin'i Hodge ny soso-kevitra rehetra mety hanintona ny fampiratiana fotsiny amin'ireo olona nitsidika an'i India. “Manantena aho fa tsia. Ireo sary hosodoko dia azo atao ankafizin'ny roa amin'ny sehatra misolo tena ary toy ny sary hoso-doko na inona na inona ny antony. Ny filentehan'ny masoandro tsara tarehy dia filentehan'ny masoandro tsara tarehy na aiza na aiza no misy azy. "
Nanomboka nandoko i Hodge rehefa nanatrika sekoly kanto nentin-drazana tany Mallorca izy tamin'izy 25 taona. "Nandany dimy taona nianarana avy amin'ilay mpanao hosodoko mahafinaritra Joaquim Torrents Llado aho. Mampianatra kilasy roa isan-kerinandro ihany koa aho izao any amin'ny sekoly kanto ary manantena aho fa hampita izany. Mpanakanto marobe isan-karazany no mahaliana ahy. Saingy heveriko fa mizara ny kalitao ampiasain'izy ireo amin'ny loko amin'ny fomba tena maneho hevitra sy malalaka izy rehetra. Ary amin'izao fotoana izao dia mankafy manokana ny kanto India Miniature Mughal aho, nanjary velona kokoa rehefa manomboka mamaky momba ireo mpilalao ao aminy ianao. ”
Ireo izay tsy afaka mitsidika ny fampiratiana mivantana dia afaka mahita ireo sary ao amin'ny tranokala galeriana Osborne ary Tranonkala manokana an'i Hodge .
Rehefa nanontaniana momba ny drafitra ho avy i Hodge dia nilaza hoe: “Mieritreritra aho, rehefa toa misy dikany, ny hiverina any India ary hanohy hiasa any ary hahita izay hitranga. Tsy dia te-hanao drafitra loatra aho, fa ny mahita ny toerana miantso anao ary misokatra amin'izay mety hitranga. ”
Rita Payne - manokana ho an'ny eTN